Fikojakojana ny boaty na tranon'omby | Soavaly Noti
rose sanchez | | tranon
Ny fikojakojana ny soavaly ary koa ny fahadiovany dia manan-danja toy ny tranony misy azy, izany hoe ny sakana na boaty, Toerana iray andaniany ora maro ary noho izany dia tsy maintsy ao anaty fepetra ara-pahadiovana sy madio tsara indrindra hisorohana ireo olana lehibe.
Ambonin'izany rehetra izany dia tsy tokony hohadinointsika fa ny biby manana trano dia mandany ora maro eo anelanelan'ny rindrina efatra ireo, noho izany dia tsy maintsy ataontsika izay hahazoana antoka fa ny cuadra no mety indrindra ary miantoka ny fitehirizana azy. Ilaina ny rivotra tsara.
Amin'ny ankapobeny, ny haben'ny tranon'omby dia tsy maintsy raisina, mazava ho azy fa afaka miovaova arakaraka ny soavaly fa tsy izy rehetra ny hazakazaka dia mila toerana mitovy. Ataovy ao an-tsaina hatrany fa tsy maintsy ho malalaka tsara izy io mba hamelana azy hihetsika am-pitoniana ary hihodinkodina mihitsy aza, zavatra fantatsika fa tian'ny soavaly matetika. Mampidi-doza tokoa fa rehefa manao io hetsika io dia mety ho voafandrika izy noho ny tsy fahampian'ny toerana. 4,5 x 3,5 ary amin'ny haavon'ny valindrihana 3m.
Raha ny momba ny fitaovana azo amboarina boaty dia misy maro, tsy maintsy jerenao fotsiny ireo zavatra fototra, toy ny ny rindrina dia malama tsara tsy misy tampon-tampona na zavatra mipoitra, izay mety ho tratra na handratra. Ny tampon-trano dia tsy maintsy asiana insulate ampy amin'ny hatsiaka sy ny hafanana ary, raha tsy izany, rakofana fitaovana hisorohana ny maripana be loatra.
Ny farafara, madio foana, dia tsy maintsy vita amin'ny mololo na manaratra. Ny fikojakojana azy dia tsy maintsy atao isan'andro ary manova azy matetika ary mamono otrikaina ilay boaty na stable. Amin'ny toe-javatra sasany, dia asaina manao tatatra amin'ny tany ianao mba hisorohana ny fijanonana. Mikasika ny rano kosa dia tsy maintsy ovaina matetika izy io satria mijanona ny fijanonana dia tsy madio kokoa io raha ampidirina amin'ireo mpisotro toaka mandeha ho azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » tranon » Fikojakojana ny boaty na stable
Famantarana izay manondro fahasalamana soavaly tsara